MobileMapper 6, primeras impresiones – Geofumadas
MobileMapper 6, पहिलो इम्प्रेशन
जुलाई, 2009 cadastre, जीपीएस / उपकरण, topografia
संग काम पछि MobileMapper प्रो, जसको हामीसँग केही सन्तुष्टि छ (सबै होईन), यस बर्ष हामी मोबाइल मेप्पेर 0. भनिने म्यागेलनको विकसित मोडेल (० डिजाईन डिजाईन) को साथ काम गर्ने छौं। अब पहिलो प्रभावहरू हेरौं:
के यो प्रो बाट फरक बनाउँछ?
मुख्य कुरा यो हो कि पहिले देखि नै विन्डोज मोबाइल6संग आउछ, जो कि सारा परिदृश्य को बदलन गर्दछ किनकि अघिल्लो को आफ्नो मेन्यू को डेटा कैप्चर प्रयोजनों को लागि टीम को कार्यक्षमताहरुमा बंद गर्यो।
विन्डोज मोबाइल हुनुको अर्थ यो हो कि यसले पकेटको कार्यक्षमता हो, वर्ड, एक्सेल, भर्चुअल किबोर्ड, (अफिस मोबाइल समावेश गर्दछ) जस्तै इन्टरनेट, तेर्सो-पार्टी सफ्टवेयर, जस्तै मोबाइल म्यापि as जस्ता आर्किपैड वा जीआईएस प्रकार्यहरू जस्ता प्रयोग गर्ने प्रोग्रामहरूलाई समर्थन गर्दछ।
यसमा २ मेगापिक्सेल क्यामेरा, टच स्क्रिन, युएसबी जडान, इलेक्ट्रोनिक कम्पास, माइक्रोफोन, स्पिकर, एलईडी फ्ल्यासलाइट, ब्लुटुथ जडान, र अन्य पनि समावेश छ। सफ्टवेयर मोबाइल म्यापिppingको रूपमा आउँछ, यस अवस्थामा संस्करण २.०। यी सुविधाहरूको संयोजनले राम्रो परिणाम निम्त्याउन सक्छ वा कमसेकम पहिलो प्रवृत्तिबाट जोगिन सक्छ: त्यो डेटा डाटा भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
पोष्ट प्रोसेसिंग सटीकता घटेको छ, यो मैले देख्नु पर्छ। प्रो संग यो फरक सुधार गर्न र ial० र c० सेन्टीमिटर बीचको रेडियल सटीक पत्ता लगाउन सम्भव थियो; यो मानिन्छ कि यसको एक १ र २ मिटरको बीचमा हुन सक्दछ, यो अझै पनि कम प्रोडक्टिंग सफ्टवेयर सहित is २,००० को मूल्यमा कम लागतमा क्याडस्ट्रल सर्वेक्षणको लागि राम्रो छ। यद्यपि यो गैर-क्याडस्ट्रल उद्देश्यका लागि वा अन्य प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष विधिहरूको साथ मिलाउन उत्तम रूपमा देखिन्छ।
अर्को नुकसान यो हो कि आधारको रूपमा काम गर्न सक्दैन, तर मोबाइलमा पर्पर प्रोसँग समाईएको आधार डेटासँग प्रशोधन पछि सम्भव गर्न सम्भव छ।
यो विन्डोजको साथ आउँछ भन्ने तथ्यले जोखिमको एक श्रृंखला थप गर्दछ, विशेष गरी दुरुपयोगको कारण, जस्तै बढी भाइरस र छोटो ब्याट्री जीवनको लागि जोखिम। अवश्य पनि, स्टाफमा जागरूकता बढाउनु आवश्यक छ कि यो संगीत, भिडियो सुन्न वा आधा नग्न दुलहीको फोटो लिनको लागि उपकरण होइन। न त यो वायरलेसको पहुँच भएको ठाउँमा इन्टरनेट सर्फ गर्न पाकेटपीसी हो।
यो प्रो भन्दा बढी कमजोर हुनुपर्दछ, यद्यपि उनीहरूले सुझाव दिन्छ कि यसले फुटपाथमा १ मिटर ड्रप झेल्न सक्छ, जुन म परीक्षणको स्थितिमा छैन। यो एसडी कार्डको साथ पनि आउँदैन, विक्रेतासँग सम्झौता नगरेसम्म तपाईले छुट्टै किन्नु पर्छ।
धेरै, म तपाईंलाई बताउनेछु कि हामी यसलाई संयोजनमा प्रयोग गरीएको ग्रामीण प्रयोगको लागी ग्रामीण उपयोगको लागि संयोजनमा, MibileMapper प्रो र कुल स्टेशन शहरी उपयोगको लागि; आह, हामी कवरेज क्यान्सर व्याख्या पनि लागू गर्दछौं गुगल बोल्ने.
कम्तीमा, एसडी कार्डबाट सुरू भएको प्रोको टाउको दुखाइ मेटाउन सकिन्छ, किनकि यो म्यागेल व्यापार संघको कारणले कारखानाको त्रुटि थियो, समर्थनले यसलाई यसलाई भाइरसलाई सम्हाल्दछ।
तपाईंले मैन्युअल पढ्ने आदत तोक्न पनि सक्दछ, किनकि मैले सुरु गरेमा बन्द बटन, यदि यो धेरै सेकेण्डका लागि पर्खदैन भने मात्र प्रणाली निलम्बित गर्दछ (वा पर्दा बन्द गर्दछ); यसले ब्याट्री निर्वहन गराउनेछ।
PD लैटिन अमेरिकामा संकट जारी छ, सिकेका कुराहरूको ताल हूगो चावेजले अन्तिम 15 वर्ष गरे र जिज्ञासाले कि राजनीतिज्ञहरूले अन्तिम 30 बनाएनन्।
अघिल्लो पोस्ट«पछिल्लो PhotoModeler, वास्तविक संसार को माप र मोडेलिंग
अर्को पोस्ट एगो MP5 परीक्षण, एक मा धेरैअर्को »
One Reply to “MobileMapper 6, primeras impresiones”
हेक्टर गुलदस्ते भन्छिन्:
फेब्रुअरी, 2014 बजे
शुभ बिहान, म जान चाहन्छु कि यदि तपाईले मलाई मेरो मोबाइला मैपर6लाई शुरु गर्न मद्दत गर्न सक्नुहुनेछ, धन्यवाद